Isqabqabsi, Fadeexad & Covid Ayaa Shaki Gelinaya Inay Brazil Martigeliso Copa America – Garsoore Sports
Isqabqabsi, Fadeexad &…
Waxuu ahaa toddobaadyo qasan oo kubbada-cagta Koonfurta Ameerika soo wajahay.
Labadii xul ee marti galinayay Copa America markii hore ee Argentina iyo Colombia ayaa iska tirtiray aqoonsigaas halka waddanka lagu beddelay ee Brazil uu isna u muuqdo inuu sababayo halista ah in tartanku ku dhaco sumcad xumo ama in gebi ahaanba la joojiyo.
Kaddib isbuucyo walwal iyo jaangooyooyin leh, martigeliyeyaasha ayaa haatan laga yaabaa inay si fudud u neefsadaan balse weli shaki ayaa jira iyadoo keliya laba toddobaad uu ka haray bilaabashada tartanka heerka caalamiga ee ugu waqtiga dheer adduunka.
Xulka Brazil oo martigalinta loo doortay ayaa waxay ahaa war xiiso leh billowgii kaddib markii Argentina iyo Colombia ay ka tanaasuleen waajibaadkooda sababo la xiriira darnaanta Covid-19, banaanbaxyo baahsan iyo kacdoonno bulsho oo ka dhan ah dowladahooda.
Laakiin martigaliyeyaasha cusub ee Brazil ayaa iyagu laftooda la dhibtoonaya: kiisas badan iyo dhimasho Covid-19 ah toddobadii maalmood ee la soo dhaafay marka loo eego meel kasta oo adduunka kamid ah.
Tan iyo markii la go’aamiyay isbuucii hore in Brazil ay martigalineeyso Copa America sannadkan, ayaa dhalisay carro baahsan oo qaaradda oo dhan ah ah.
Madaxweynaha dalka Brazil Jair Bolsonaro ayaa sheegay in go’aanka uusan aheyn mid laga wada hadlayo isla markaana tartanka oo ay ka qeyb galayaan xulal ka socda Koofurta Ameerika uusan qatar ku aheyn caafimaadka.
Wuxuu todobaadkii hore sheegay inuu lahadlay wasiirka caafimaadka ayna isku afgarteen qabashada munaasabadan.
Dhanka kale dhowr kamid ah madaxda waaweyn ee dalkaasi ayaa si cad u sheegay inaysan diyaar u aheyn in la martigeliyo cayaaro iyadoo ay jirto xaalad caafimaad darro.
Warbixinno laga soo qaaday xerada xulka kubbada-cagta ee Brazil ayaa soo jeediyay in cayaartoyda sida Neymar, Casemiro iyo xiddigaha kale ee Selecao aysan diyaar u ahayn inay cayaaraan.
“Waxay leeyihiin fikrad, waxay u sheegeen madaxweynaha [Xiriirka Kubbada-cagta Brazil], waxayna u sheegi doonaan dadweynaha.” Tababare Tite ayaa ku sheegay shirkiisa jaraa’id kahor kulankii isreebreebka Koobka Adduunka ee ay la ciyaareen Ecuador jimcihi.
Kaddib kulankaas, oo kusoo dhammaaday 2-0 oo ay ku badisay Brazil, cayaaryahanka khadka dhexe ee Real Madrid ayaa aamusnaanta ka baxay isagoo yiri: “ wax badan ma dhihi karno sababtoo ah qof walba wuu ogyahay siddaan dareemeeyno.”
“Si cad uma dhihi karno, Ixtiraam badan ayaa nagu jira. markasta oo aan rabno inaan fikirkeena dhiibano waxyaabo badan ayaa dhaca.”
“Waxaan dooneynay inaan hadalno cayaarta Paraguay kaddib [Arbaco/berri] maxaa yeelay wadada loo marayo Koobka Adduunka ayaa ah diiradeena. Waxaan rabnaa inaan soo bandhigno fikradaheena. ”
Hadalka Casemiro ayaa isla markiiba qaranka uga tagay raad dagaal, iyadoo la isla dhexmarayo in xulka Brazil kaliya aysan ahayn laakiin wadamada kale ee kaqeybgalaya ay ka baxayaan ama haddii kale ay soo dirsanayaan kooxo daciif ah.
Tababaraha xulka qaranka Brazil Tite ayaa kamid ah kuwa dabka uu ku hurayo kaddib markii taageerayaasha madaxweynaha dalka Jair Bolsonaro ay ku baaqeen in shaqada laga ceyriyo.
Siddeey wax noqdaan wararkeena xiga ayaan idiin kugu soo gudbin doonnaa insha allah.